भोलि असोज महिनाको पहिलो दिन, कुन राशिलाई कति शुभ ? हेर्नु होस दैनिक राशिफल ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Horoscope/भोलि असोज महिनाको पहिलो दिन, कुन राशिलाई कति शुभ ? हेर्नु होस दैनिक राशिफल !
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries) शारीरिक तथा मानसिक रूपले स्वस्थ अनुभव गर्नुहुनेछ। साहित्य तथा सिर्जानात्मक क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। विद्यार्थी वर्गको लागि समय उत्तम रहनेछ। परिवारमा शान्तिपूर्ण वातावरण रहनेछ। कडा परिश्रम पश्चात पनि कार्य सफलता नमिल्दा मन चिन्तित रहन सक्छ।
वृष – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो (Taurus) आफ्नो क्रोध तथा वाणीमा संयम राख्नुहोला। यस दिन पानीबाट टाढा नै रहनुहोला। जग्गा-जमिनको कारोबार गर्दा विशेष ध्यान दिनुहोला। मध्यान्हपछि भने परिस्थिति अनुकूल रहनेछ। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। कार्यक्षेत्रमा समय अनुकूल रहने देखिन्छ।
मिथुन – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह (Gemini) परिवारमा सुख-शान्तिमय वातावरण रहनेछ। दाजु-भाईबाट भरपूर सहयोग मिल्नेछ। मित्र तथा आफन्तसँग रमणीय भेटघाट हुनेछ। मध्यान्हपछि मनमा नकारात्मक सोच उत्पन्न हुनेछ। खान-पानमा विशेष ध्यान दिन जरूरी देखिन्छ। कुनै महत्वपूर्ण निर्णय लिनु अघि राम्रोसँग सोच बिचार गर्नुहोला।
कर्कट – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो (Cancer) परिवारका सदस्यको साथमा आनन्दमय रूपले समय बित्नेछ। तपाईंको मधुर बोलीको कारण अरु प्रभावित हुनेछन्। मध्यान्हपछि यात्राको योग बन्नेछ। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। करयक्षेत्रमा सहकर्मीको भरपूर सहयोग मिल्नेछ।
सिंह – मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे (Leo) तपाईंको मनोबल तथा आत्मविश्वास बढ्नेछ। वैवाहिक जीवनमा सुमधुरता छाउनेछ। पारिवारिमा खुसीयालीको माहोल रहनेछ। खर्चमा वृद्धि हुनेछ। साथी-भाईबाट लाभ मिल्ने सम्भावना रहेको छ। वाणीमा संयम राख्न जरूरी देखिन्छ।
कन्या – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो (Virgo) व्यर्थको झै-झगडामा नपर्नुहोला। परिवारका सदस्यको साथ मदभेद हुनसक्छ। अत्याधिक खर्च हुँदा आर्थिक समस्याले सताउन सक्छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखा पर्न सक्छ। मध्यान्हपछि भने परिस्थिति अनुकूल हुनेछन्। आफू भन्दा अग्रजको सहयोग मिल्नेछ।
तुला – र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते (Libra) नयाँ कार्य सुरु गर्नको लागि दिन शुभ छैन। स्त्री मित्रबाट विशेष लाभ मिल्ने सम्भावना छ। व्यापार व्यवसायमा पनि समय अत्यन्त शुभ रहनेछ। मध्यान्हपछि भने मनमा व्यग्रता रहनेछ। वाणी तथा क्रोधमा संयम राख्नुहोला। खर्चमा वृद्धि हुनेछ।
वृश्चिक – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु (Scorpio) हरेक कार्य सरलताका साथ पूरा हुनेछन्। व्यवसाय क्षेत्रबाट विशेष लाभ मिल्ने सम्भावना छ। सरकारी क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ। मध्यान्हपछि मित्रबाट भरपूर सहयोग मिल्नेछ। नयाँ कार्य सुरु गर्न तथा महत्वपूर्ण निर्णय लिन समय अनुकूल छैन।
धनु – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे (Sagittarius) नशारीरिक तथा मानसिक अस्वस्थताको अनुभव हुनेछ। धार्मिक यात्राको योग बन्नेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा समय प्रतिकूल रहनेछ। मध्यान्हपछि भने परिस्थिति अनुकूल हुनेछन्। कार्यक्षेत्रमा विशेष सफलता मिल्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ।
मकर – भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि (Capricorn) स्वास्थ्यमा समस्या आउनसक्छ। आकस्मिक धन खर्च हुँदा आर्थिक अस्थिति कमजोर रहला। परिवारका सदस्यसँग मनमुटावको स्थिति अत्पन्न हुनसक्छ। खान-पानमा विशेष ध्यान राख्नुहोला। अनावश्यक वाद-विवादमा नपर्नुहोला।
कुम्भ – गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द (Aquarius) वैवाहिक जीवनमा मनमुटाव हुनसक्छ। विद्यार्थी वर्गको लागि समय शुभ रहनेछ। परिवारमा सुख-शान्तिमय वातावरण रहनेछ। दैनिक कार्यमा अवरोध आउनसक्छ। कार्यक्षेत्रमा उच्च पदाधिकारीसंग वाद-विवादको सम्भावना देखिन्छ। अधिक मिहेनतपछि पनि सफलता नमिल्दा मन चिन्तित रहला।
मीन – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि (Pisces) परिवारका सदस्यका साथ आनन्दमय समय बित्नेछ। दैनिक कार्यमा विलम्व होला। कार्यक्षेत्रमा सहकर्मीको भरपूर सहयोग मिल्नेछ। जीवनसाथीसँग मनमुटाव हुनसक्छ। प्रेमी तथा जीवनसाथीको स्वास्थ्य चिन्ताको विषय बन्नसक्छ। सामाजिक मान-सम्मानमा आँच आउनसक्छ।